I-Leo Sun Aries Moon: Ubuntu bukaFrank - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Leo Sun Aries Moon: Ubuntu bukaFrank
I-Leo Sun Aries Moon: Ubuntu bukaFrank
Xa abantu beLanga Sun Aries Moon bethetha, umhlaba umamele. Ngobukrakra kwaye bathembele kubuchule babo, aba bantu bazuza lukhulu ebomini ngokuba nesibindi. Banesibindi ngokwaneleyo sokuthetha, ukuthatha umngcipheko kunye nokungabinayo inhibition enye.
Iinkokheli zokuzalwa, ngabona bonwabileyo xa belawula izinto. Amandla abo kunye nokuzimisela kuya kuhlala kubazisa ngokwaneleyo ukuba ii-egos zabo zondliwe. Kwaye uninzi lwazo lunee-egos ezinkulu ngokwenene.
Umdibaniso wenyanga ka-Leo Sun we-Aries ngokufutshane:
Iimpawu: Inzondelelo, inyani kwaye inemveliso
Izinto ezingalunganga: I-Fantasist, ukulawula kunye nokunyanzeliswa
Iqabane eligqibeleleyo: Umntu ocela umngeni kubo ngazo zonke iindlela
Ingcebiso: Kuya kufuneka bathobeke xa kufikwa kwimpumelelo yabo.
Uninzi lwazo ngamagorha alibona ilizwe njengendawo yabo yokulwa. Akunandaba nokuba ngaba malunga nefilosofi, ukuthandana okanye ubomi bemihla ngemihla, abanako ukufumana ukuzonwabisa kwimeko ngaphandle kokumelana nomngeni.
U-Leo Sun Aries Inyanga abantu abahoyi kangako kwifantasy. Baxakeke kakhulu yiyo. Awusoze ubafumane bephupha kuba luhlobo oluthatha inyathelo.
Kungenxa yoko le nto ubomi ecaleni kwabo bungadinisi. Njengazo zonke izinto ezikhululekileyo nezichazayo, zihlala zihleli kwaye ziqinisekile kakhulu ngazo. Ingcinga neemvakalelo zabo azinakuze zicinezelwe.
Bonke uburhalarhume babo buya kugxila kwinto eyakhayo kunye nemveliso. Banika ukubaluleka kakhulu kwikhondo labo lomsebenzi. Njengazo zonke iiLeos, bafuna ukwamkelwa kwaye baphile ubomi obutofotofo ngeziyolo ezininzi.
Akusayi kubakho mntu kwaye akukho nto inokuhlala endleleni yabo kuba bazimisele kwaye bajolise. Inzondelelo nentshiseko yabo ibenza bashushu njengomlilo.
Akuqhelekanga ukuba bahlanganyele kwiiprojekthi ezibonakala zingenakwenzeka kuba yindlela abakhetha ngayo ukuphila ubomi babo.
pisces amadoda kubudlelwane
Yintoni ebenza baphawule iyabulelwa ngenxa yeenzame zabo kunye neetalente zabo. Bayathanda ukwazi ukuba abanye bayazi ukuba banokubonisa kangakanani kwaye beze nayo.
Umdibaniso wenyanga we-Leo Sun Aries ubonakalisa ukuba bafuna ukushiya into ngasemva emva kokuba bemkile. Baza kulwela injongo okanye umntu uya kuwenza onke amandla abo kuba ibenza bazive ukuba bayazilwela.
Ukuhlala nje ecaleni kwaye ujonge izinto ezenzekayo ayisiyiyo indlela yabo. Kufuneka babandakanyeke kwaye bashiye uphawu lwabo. Kwaye baya kusebenzisa yonke inkalipho yabo ekulweni nabo ngokwabo kwaye babe ziinkokheli ezinkulu.
Eli iya kuba lelinye ithuba kubo lokubonisa indlela abazithembe nabathembeke ngayo. Kucetyiswa ukuba bafunde kunokuba nzima kwabanye ukulungelelanisa nesantya sabo. Kuya kufuneka babone ukuba umtsalane wabo, isisa kunye namandla okukhuthaza zizinto abazidingayo ukulungiselela abanye abantu, hayi ukuba bazisebenzise njengomboniso.
I-ego yabo ihlala ithatha indawo kwaye banokuba ngabantu abazithandayo baze balibale konke malunga nexabiso labo. Ukuqonda ukuba amandla abo axhomekeke kwimo yokuguquguquka kunye nokukwazi ukulalanisa kuya kubenza baphumelele kulo naliphi na idabi.
Ukuba neemeko zokuphumelela kunokubanceda bonwabe kwaye babe noxolo nabanye. Kodwa ukuzingca kakhulu, ukuthatha umngcipheko kunye nokuzithemba akufuneki kulawule ubomi babo. Ungayichazanga eyokuba ngamanye amaxesha banomdla kakhulu kwaye balibale konke malunga nengcinga.
Ayinamsebenzi nokuba bakrelekrele kangakanani, uLeo Sun Aries Moon abantu kusafuneka bacinge ngaphambi kokuba benze. Kuba bayayazi imikhosi yabo kwaye bayayithemba intuition yabo, ngamanye amaxesha bayakuma kwaye bazingce ngale nto bayigqibileyo.
Kodwa akukho mntu unokuqiniseka ngento abayenzileyo ngalo lonke ixesha, ke ukuthobeka yeyona ndlela yokuhamba. Ukumamela iingcebiso ezivela kwabanye ikwangumbono olungileyo.
Imimoya ehloniphekileyo entliziyweni, aba bantu banomdla wokuzikhukhumeza. Ngenxa yokuba bethe tye kwaye bephandle, baya kuhlala bekhathazwa ngamazwi abo. Ayithethi ukuba bazimisele ukuyenza, bathembekile kakhulu kwaye banomdla wokuchaza indlela abavakalelwa ngayo ngokwenyani.
Ukulawula oku kuya kubanceda benze abanye baqonde ukuba banentlonipho kuye wonke umntu. Xa kuziwa emsebenzini wabo, bayila kwaye banemveliso ukuba yonke into ebangqongileyo ihambelana kakuhle.
Abantu beLanga Sun Aries Moon kufuneka baqwalasele ngakumbi iimfuno kunye neminqweno yesithandwa sabo kuba banokubakhusela kakhulu kwaye boyike.
ILeos ifuna ukwamkelwa, ukuba isothandweni kwaye idrama. Ngamaqhawe abo afuna iqabane.
Banomdla kwaye bahlala bethandana, bafuna ukuba abanye bathembeke, bathembeke kwaye bathembeke njengabo. Ngokukodwa kubomi babo bothando.
Nangona kunjalo, umoya wabo wokuzonwabisa kunye nokuthanda kuya kubenza bangcatshe loo migaqo. Baza kuba kunye nomntu onomdla kwaye onomdla njengabo. Kwaye kunokuba nzima ukufumana abantu abanje.
Ungayichazanga eyokuba bafuna iqabane elibathandayo kwaye elibaxabisayo njengooKumkani kunye neeQueens, yonke imihla. Xa bedikiwe okanye beziva bengahoywanga, bayaqhekeka kwaye baqale ukukhangela omnye umntu.
Abathandi beNyanga Aries kufuneka bacelwe mngeni. Awusoze ubenabo benze imisebenzi yasekhaya okanye bahlala esofeni, bezipholele nje. Kungenxa yoko le nto befuna iqabane elibacela umngeni.
Xa befuna ukubonisa ukuba bayamthemba umntu othile, baqala ukuba nengqumbo. Ukuba baya kukuxelela ukuba uyacaphukisa, unokuqiniseka ukuba bakukhathalele.
Isiphene sabo kukungxamiseka. Kwaye xa beyifumana, abasakhathali ngomntu. Bathanda ukuvumela iimvakalelo zabo zilawule. Kodwa oku akukubi. Yintoni embi ngabo kukuba banokuba nokuzingca kwaye kungabi yinto encinci yokuqonda.
Indoda yeLanga Sun Aries yeNyanga
Kuba abanakubonakala bonwabile ngaphandle kokuzixakekisa ngezinto, amadoda e-Leo Sun Aries Moon ahlala esenza into. Banemigaqo ephezulu yokunyaniseka nembeko. Ungayichazanga indlela abaziphethe kakuhle ngayo.
Ngelixa benomsindo, ngekhe bangcatshe umntu. Ukunganyaniseki kunye nokukhohlisa kubenza bafune ukubaleka.
Njengokuba banamandla kwaye benamabhongo, ngekhe bahlale phantsi balinde okanye baphuphe emini. Baya kuhlala bethatha amanyathelo. Aba bantu baxakeke kakhulu ukuba bangacinga. Bayayazi indlela yokwenza ilizwi labo livakale. Kwaye ngokuqinisekileyo banesibindi.
Baya kuthetha ngeemvakalelo zabo nangezimvo zabo ngaphandle kokuthintelwa. Njengeenkokheli ezizelwe ngokwendalo, ezi Leos zezona zonwabe kakhulu xa zilawula. Ngenxa yokuba bathatha inyathelo kwaye baneminqweno emihle, baya kuhlala befumana ingqalelo abayifunayo ngolangazelelo.
Impembelelo yabo yeAries ibenza babe ngamagorha. Ubomi kunye neLanga Sun Aries inyanga yindoda ayisoze yadika. Ngenxa yokuba wonwabe kakhulu kwaye umsulwa, akasokuze ahlupheke kwimicimbi yeemvakalelo okanye ezengqondo.
uyenza njani indoda eyi-aries enomona
Ukuzithemba yena, lo mfo akasoze azame ukufihla iminqweno yakhe yangaphakathi. Inyani yokuba ethe ngqo kwaye ukulungele ukuthatha inyathelo iya kuba naye esenza into eyakhayo ngalo lonke ixesha.
Njengazo zonke iiLeos, unika ukubaluleka kakhulu emsebenzini wakhe nakwisikhundla sentlalontle. Ufuna ukuthandwa nokuphila ubomi obutofotofo. Iimbono kunye nemigaqo yakhe iphezulu.
Umphefumlo ohloniphekileyo, unjengelungu le-aristocracy. Kodwa angakulibala ukuba abanye bayonzakala xa engqala kwaye evakalisa izimvo zakhe ezibukhali. Ukanti uyayithanda indlela ayiyo kwaye ulindele ukuba abanye bafane.
Umfazi weLanga Sun Aries Moon
Abasetyhini ngelanga labo kuLeo kunye neNyanga yabo kwii-Aries zinamandla, zinomdla kwaye ziqhutywa kakhulu yimiceli mngeni. La manenekazi anokuba nesibindi kwaye athathe imingcipheko abanye abanokuze babe nobuganga bokucinga ngayo.
Umfazi weLanga Sun Aries Moon uza kuthatha nayiphi na iprojekthi ngaphandle kokuthandabuza. Umsindo wakhe uyakhawuleza, kwaye indlela asabela ngayo iyamangalisa.
Uyakuzonda ukusilela kwaye uhlala ezama ukwenza izinto zibengcono kwakamsinya nje ukuba ziqale ukwehla. Ukuba umntu uza kusongela imbeko kuye, uya kuzikhusela kwangoko.
Ungumlwi ohlala efuna indawo yokuqala. Iingxaki anazo ziya kuqwalaselwa ngokuzinikela okukhulu kunye nomzamo. Abantu baya kumbona enetalente yolawulo.
Esebenzayo kwaye evulekileyo kwizinto ezintsha nakwizinto ezinokuphucula ukuzithemba kunye nomfanekiso wakhe, eli nenekazi liya kuzondelela ngenzondelelo nangokuzimisela iinjongo zalo.
Unokuba ungxamile kwaye ukhawuleze kakhulu, kodwa uya kuzama yonke into ebomini. Uxanduva noxanduva analo luya kuhlala luzalisekiswa. Akayithandi into yokuba abantu baphuhle ngakumbi ngokwasengqondweni kunaye.
Ucinga ukuba akakho krelekrele phofu. Kodwa akukho mntu uya kuyazi le nto ngaye njengoko ehlala elawula kwaye eshiya umbono wokuba ungaphezulu.
Ingqondo iyamchaza kakhulu. Uyakudlala indima yenkokheli kakuhle kakhulu, nokuba kusekhaya okanye emsebenzini.
Inyanga kwii-Aries Inkcazo yoBuntu
Ukuhambelana kukaLeo neempawu zelanga
Umdlalo oGqibeleleyo kaLeo: Ngubani oyena uhambelana kakhulu naye
U-Leo Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
loluphi uphawu ngo-Okthobha 27
NgoLwesithathu Intsingiselo: Usuku lweMercury
UPluto kwindlu yesi-5: iinyani eziphambili malunga nefuthe lazo kubomi bakho nakubuntu bakho
Leo man gemini ulwalamano lomfazi
nguwuphi umqondiso onokuthi u-12
ukwenza uthando kumfazi we-gemini
sagittarius indoda sagittarius umfazi ukuhambelana
venus in pisces indoda ngothando